Nkọwa ihe omimi Kedu Google 'Echere Email' na-eme ka ozi ịntanetị guzosie ike
Nkọwapụta Email ka a kọwara dịka echiche data nke ọma nke na-eme kaụfọdụ ụdị ozi ịntanetị na-egosipụta ọdịnaya dị mma. Ndebanye aha kwesịrị ekwesị na nhazi nke akara ederede emailnye gị ohere ịnakọta data ọzọ na iru ndị ahịa na ngwa Google dị ka Kalinda ma ọ bụ igbe mbata.
N'okwu nke e-azụmahịa, nke a na-emetụta mbupu na nkwenyenyocha nwere ike ịnweta njikwa pụrụ iche na igbe email ahụ, nke ga-eme ka ahụmịhe ọrụ - dedicados a un. Jack Miller, ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị akọwa akụkụ nke iji akara email.
Nkọwapụta Email maka Order Confirmation
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke Linking Data (JSON-LD) nke na-amalite site na edemede HTMLakara nke ụdị "ngwa / ld-json" ụdị:
Nzọụkwụ ọzọ ga-egosi ọnụọgụ abụọ ọzọ na-ekerịta data na usoronke sụgharịrị ozi a kapịrị ọnụ:
Ọbụna na-enweghị ihe ọmụma banyere JSON, ọ ga-adịtụ mfe ịghọta nke ahụonye zụrụ "ụfọdụ ngwaahịa pụrụ iche" site na "SomeDistributor.com" maka $ 60.
Njirimara ndị a dị mkpa maka ederede Email ka ị rụọ ọrụ maka nkwenye iwu:
Nọmba nzipu - na - egosi njirimara nke onye ere
PriceCurrency - jiri ISO 4217 atọ akwụkwọ ozi
Onye ahịa - bụ aha otu nzukọ ma ọ bụ onye ọ bụla
Enyem aka - gụnyere ọnụahịa, ọnụego, ụdị na ọtụtụ ndị ọzọ nke ngwaahịa a zụtara
Email Markup nwekwara ọtụtụ dị iche iche a tụrụ aro na nhọrọ nhọrọ makazụta ozi nkwenye.
Ntinye ederede maka ozi maka ozi eziputa
A pụkwara iji nlezianya hụ ncheta site na mgbakwunye ma ọ bụ JSON-LD ma ọ bụ microdataka ederede email HTML dị ka egosiri na ihe atụ dị n'okpuru:
Ihe atụ ahụ na-egosipụta nanị ihe ndị dị mkpa, ma ọ bụ ikpenye ozi EmailMarkup, a na-agbakwụnye ọtụtụ ihe nchịkọta ọzọ iji welie ahụmahụ nke onye zụrụ ya. Nke a gụnyere nsuso URL na nọmba nchịkọta makaakọwapụta koodu nsuso nke ụgbọelu ahụ na ịmepụta ngwugwu ngwugwu na Gmail ma ọ bụ igbe Google dịka.
Ndị Ahịa Ga-ahụ Ozi Gị Ka Mma?
Ndị ahịa ahụ na igbe nbata Google ga-aghọrọ uru dị mma maka Email Markup intervention.Ebe ọ bụ na ihe karịrị otu ijeri mmadụ jiri Gmail mee ihe, imewanye ozi na Gmail nwere nnukwu ndị na-ege ntị.
Naanị ndị na-eziga edebanye aha nwere ike ịnweta Email Markup. Google chọrọ ihe ndị a iji debanye aha onye ọrụ:
Ngosipụta ozi site n'iji ma ọ bụ Ngalaba Ejiri Ejiri Igodo ma ọ bụ Usoro Okpukpe Nnyefe
Mkpesa metụtara nje Spam kwesịrị ịdị ala
akụkọ ihe mere eme nke izipụ otu narị ozi ịntanetị kwa ụbọchị na adreesị Gmail
A ga-ezipụ ozi niile site na adreesị ozi-e edozi
Ị ga-agbaso ụkpụrụ nduzi nke Gmail's Bulk Sender
Ọ ga-abụ na onye ahịa nwere ike ịchọta onye nwere obi ụtọ. Ịzụta ịntanetị na-atụ anyankwurịta okwu na ndị na-ere ahịa mgbe a nyere iwu ma zipụ ngwaahịa. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa na-ezipụ nkwenye zuru ezu naezipụ ozi ịntanetị. Ka o sina dị, n'ihe gbasara nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ nke ọkara, na-agbakwunye nnukwu data nke datamarkup nwere ike ịdị mma karịa ozi ịntanetị ndị ahụ maka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa.